Itoobiya oo Xabsiga kasii deysay Maxaabiis badan oo katirsan ONLF – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Itoobiya oo Xabsiga kasii deysay Maxaabiis badan oo katirsan ONLF
Dowlada Itoobiya ayaa cafis u fidisay Maxaabiis badan oo ku xirnaa magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka Dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana maxaabiistan lasii daayay ku jira xubno badan oo katirsanaa Jabhada ONLF.
Madaxweynaha maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa amray in xabsiga laga sii daayo ku dhawaad 1,500- oo maxaabiis ah ,kuwaa oo ku xirnaa xabsiga loo yaqaan Jeel Ogaadeeniya oo inta badan lagu xiri jiray xubnaha ONLF.
Ehelada dadka xabsiga laga sii daayay ayaa uga hortagay afaafka hore ee xabsiga eheladooda oo mudo badan ka xirnaa, waxa ayna muujiyeen dareen farxadeed ay ka qaadeen in xuriyadooda dib u helaan lana midoobaan eheladooda.
Maxaabiistan xabsiga laga sii daayay ayaa kusoo aadeysa xili dalka Kenya dhawaan wadahadal uga furmay Dowlada Itoobiya iyo Jabahda OLNF oo mudo aad u fog dagaal u dhaxeeyay.
Dowlada Itoobiya ayaa sidan oo kale dhawaan xabsiyada uga sii deysay siyaasiyiin iyo dad kale oo dowlada Mucaarad ku ahaa, waxaana arimahan kusoo aadayaa xili dalka Itoobiya xaalad deg deg ah lagu soo rogay.